927s REBECCA ၏ဖုန်းသည် Hack ခံရသည်။ (၂၄ နာရီအသုံးချအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ GAME MASTER သူလျှိုလေ့ကျင့်ရေးထုတ်ဖော်ပြသခြင်း) images and subtitles
- Matt နှင့် Rebecca ရုပ်သံလိုင်းသို့ပြန်လာပါ။ ကျနော်တို့ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ - လျင်မြန်စွာ။ - ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ မိန်းကလေးများအိပ်ပျော်နေကြသည်။ - အင်း၊ ဒီဟာငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သင့်တယ်။ - စောင့်ပါ။ သူတို့အားလုံးသည် Tesla တွင်မည်သို့မည်ပုံနေထိုင်ကြမည်နည်း။ - သူတို့ကသင့်တော်ပါတယ် - အိုး, gosh, ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ - အားလုံးကောင်းပြီ၊ သူတို့ကဒီမှာမကြာမီနိုးလာမှာပါ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အရာအားလုံးကို set up ရသင့်တယ် ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေး။ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား - နင့်ကိုငါထင်ထားပြီ၊ သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းရွေးချယ်လိုက်သည် - ငါဆိုလိုတာကငါလုပ်ခဲ့တာပဲ၊ ငါကြင်ကြင်နာနာသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်တယ် ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုသင်တန်း၊ နောက်ဆုံးမှာဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်။ - အိုး။ - [ကင်မရာသမား] အိုကေ၊ - ကောင်းပြီ, ငါတစ်မျိုးကတော့အားလုံးရသွားတော့မယ် ပတ်ပတ်လည်တစ်ခုအဘို့ကို set up, အဆင်ပြေ? - နံပါတ် ၁ ကိုစိန်ခေါ်ပါ။ - နင်ယောက်ျားတွေ၊ သူတို့ကိုနိုးလာတာတွေစတင်လုပ်နေကြတယ်။ ငါတို့မကြာခင်ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုသလား? - ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ - နေဝင်တော့မယ်။ - ငါကလူတွေကိုမဆွဲတော့ဘူး။ - အိုကေ။ သငျသညျယောက်ျားတွေထင်သောအေးဂျင့် နှင့် Matt တစ်သွန်းတက် setting ခဲ့ကြသည် ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသစ်ကိုရှာပါ၊ မုသားရှာဖွေရေးစက်ရောနှောခြင်းကိုအစား Matt အိပ်စက်ခြင်းမိုcloud်းတိမ်ကိုတင်, ဒါကြောင့်ငါ့အလိုရှိသမျှ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများသည်အိပ်ပျော်နေကြသည်၊ သူတို့နိုးလာလိမ့်မယ်။ Matt, ငါတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ - [Matt] ဟုတ်တယ်၊ - အိုကေ၊ ဒါဆိုမင်းကဘယ်သူ့ကိုအောက်မှာမှတ်ချက်ပေးတာလဲ မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့မင်းထင်တယ် ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမသင်္ကာစရာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုအသိပေးပါ။ ငါတို့အားလုံးကိုနိုးထလိုက်တယ်။ - ကျွန်တော်ဒီကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့တာလဲ - ငါတို့ဘာကြောင့်ပန်းခြံမှာနေရတာလဲ - မင်းတို့ယောက်ျားတွေမမှတ်မိဘူးလား ငါတို့လမ်းလျှောက်ပြီးငါတို့အားလုံး Slurpees ရခဲ့တယ်။ - Slurpees ။ - Slurpees ။ - ဟုတ်တယ်၊ လူတိုင်းလိုပဲ "ဟုတ်တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြရအောင်!" ပြီးတော့ ။ - သင်မှတ်မိပါသလား? - သင်မှတ်မိပါသလား? - အင်း။ - ဒါဟာချယ်ရီကိုကာကိုလာပါ။ - အိုးကြည့် - ချယ်ရီကိုကာကိုလာ။ - အင်း။ - ငါတို့ကိုမင်းတိုကိုဘဲလ်ကိုခေါ်သွားတယ်၊ သူတို့ကငါတို့ကိုဒီစောင်ပေးတယ် ယောက်ျားတွေကမင်းနင့်ကိုအိပ်ချင်နေတယ်။ - ဒါပဲကောင်းတယ်, မော။ - သင်တန်းမတက်မီ။ - Matt၊ သင်အကောင်းဆုံးကိုရှင်းပြသင့်သည် ငါတို့လုပ်နေတာသူငယ်ချင်း - ငါတို့လုပ်သင့်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်သည် သငျသညျယောက်ျားများတက်နှစ်ခုအဖွဲ့များသို့ခွဲ။ ကျေးဇူးပြု၍ ကြွက်နှင့်အတူနေလို့ရနိုင်မလား? - မဟုတ်ပါ၊ နံပါတ် - ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်မရေတွက်ပါဘူး။ လိုပဲရုံတက်တွဲ။ - တွဲဖက်! - အင်း။ - သူမ၏အိတ်ကပ်ထဲမှာထည့်ထား? - ဟုတ်ကဲ့! - နောက်အရာ, ငါတို့ဤလမ်းကိုကျော်လမ်းလျှောက်မယ်။ ယောက်ျားတွေလာစမ်းပါ။ ငါအခုဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် ဘယ်သူလဲဆိုတာအတိအကျသိဖို့လိုတယ် အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ - ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့အနိုင်ရချင်တယ် - ငါသိတယ်။ - ငါတို့တကယ်ချယ်ရီကိုကာကိုလာရ? - ငါမသိဘူး၊ ငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်။ - အဲဒီမှာကြွက်တစ်ကောင်ရှိလား။ - ဟုတ်၊ မင်းမြင်ချင်တာလား - ကောင်းပြီ၊ မင်းတို့ဒီပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုအတွက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုအကောင်းဆုံးတွက်ဆနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ မင်းရေဗက္ကာရဲ့ BFF ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ ထို့နောက်သင်သည်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည် အတူတူတကယ်ကောင်းကောင်းအတူ။ - ဒါရေဗက္ကာလား။ - မင်းသူတို့ကိုမပြောသေးဘူးလား - အင်း? - မဟုတ်ဘူး၊ ငါ ... - ဘာလဲ - ငါရေဗက္ကာပါ - ရေး! - ရေး! - ငါတို့လက်ခုပ်တီးတယ် - ငါတို့စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းတိတိကျကျဖော်ပြသည်။ ငါလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူး - အိုကေဒါ၊ ငါတို့အခုငါတို့လုပ်နေကြတာ ငါတို့အသင်းနှစ်ခုမှာမင်းရှိနေပြီ။ ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ ပြွန်ပြွန်ဖြင့်သင်၏ခြေကိုအတူတကွကပ်ပါ။ ယောက်ျားတွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား - မင်းကိုကူညီမယ် - အင်း၊ - ငါဒီမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လိုနေလား။ - အိုကေ၊ ဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ - အဲဒီမှာနောက်ကျော။ - စိတ်မပူပါနဲ့၊ ရှင်းပြပါ့မယ်။ - အိုကေ! - အိုကေ၊ ဒီမိန်းကလေးအားလုံးကိုကျွန်မအခုမယုံဘူး။ သူတို့ထဲကတချို့ဟာအနည်းငယ်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က Mr. X အတွက်လုပ်နေတယ်။ ငါတို့မှာစိတ်ကူးမရှိဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ ရေဗက္ကာရဲ့ဗီဒီယိုမှာမင်းတစ်ခုခုတွေ့ခဲ့ရင် ဒီမှာ, ငါသူလျှိုရှိသည်တွေ့နိုင်ပါသည် ငါလှိမ့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကင်မရာ။ တရားသူကြီးသုံး ဦး စလုံး၊ ရေဗက္ကာ၊ နှင့် Agent S ကိုဒီမှာထိုင်လိမ့်မည် သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကျောနှင့်အတူ။ ရေဗက္ကာရဲ့ဖုန်းကဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ - စိန်ခေါ်မှုများသည်အလွန်ပင်ပန်းသည်။ သူတို့ဒီမှာလာပြီးရေကိုယူမယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကမခံနိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် ရေဗက္ကာ၏ဖုန်းကိုယူရန်သွေးဆောင်သည်။ မည်သူ့ကိုသံသယ ၀ င်သည်ကိုအောက်တွင်ချမှတ်ထားပါ။ ဒါ့အပြင်ဒီဗီဒီယိုကိုပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ လက်မလျှော့ပါ၊ စာရင်းသွင်းပါ၊ သတိပေးချက်များကိုဖွင့်ပါ၊ အားလုံးကိုနှိပ်ပါ။ သငျသညျပွုပါလျှင်သူတို့ပြွန်တိပ်တယ်မီ သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်, ပြွန်တိပ်ကစားမှတ်ချက်ပေး။ ပြန်ရအောင် - အားလုံးကောင်းပြီ၊ လူတို့၊ နည်းနည်းပဲ။ - [မိန်းမ] နည်းနည်းပဲ။ - Ah! - ဒါကပြွန်တိပ်တွေလိုအများကြီးပါ။ - အိုး၊ မင်းသိတယ်၊ - ဒါပေမယ့်လည်းငါတတစ်ခုတည်းကိုပြု၏။ အေးဆေးနေလား အဲဒါကောင်းလား - နောက်ထပ်လိုအပ်စရာရှိသေးတယ်၊ ငါမသိဘူး - ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? - ငါကဒါ့့ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ - ငါအသင်း၏အနိုင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် ငါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြွန်တိပ်အလုပ်ကိုပြု၏။ နားထောင်နိုင်၊ လေခတ်တယ်။ အပြုသဘော, အလင်းပြွန်တိပ်။ ငါ့အသင်းဒီတစ်ခုအနိုင်ရတာပါ။ တကယ်တော့ကျွန်တော့်အသင်းသည်ဒီအသင်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ် တကယ်တော့ဒီအဖွဲ့မှာသုံးခုရှိတယ်။ ငါတို့မှာဝက်ဝံကြွက်ရှိတယ်။ - လူတိုင်းကိုခန့်ထားကြစို့။ - အိုကေ၊ ငါမပြောခဲ့တာကအဲဒါပဲ ရေဗက္ကာသည်သင့်ကိုစစ်ကြောစီရင်သည်သာမက၊ Agent R နှင့် Agent S. တို့သည်လည်း - အင်း! - အင်း၊ GMI! - GMI! - သူတို့ကကျိန်းသေသိပါလိမ့်မယ် အဘယ်သူသည်ငါ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မည်။ - မင်းသုံးယောက်လုံးဘာလို့မလုပ်တာလဲ ဒီတော့ရှေ့ဆက်နှင့်အဆင်ပြေ, သင့်ထိုင်ခုံယူ? - ဟမ်? - အိုကေ! - ဒီမှာပြီးပြီ။ - [Agent S] ကောင်းပါပြီ။ - [Agent R ကိုကြည့်ပါ။ - အားလုံးကောင်းပြီ၊ ပိုက်ဆံကကြွက်မဟုတ်ဘူး။ - ဒီနီးပါးဖဲ့! အိုကေငါပြောင်းလို့ရလို့ဝမ်းသာတယ် ကြောင်းစားဆင်ယင်ထဲကနောက်ပြောင်မှုများ။ စိုစွတ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဒီချွေးထွက်အင်္ကျီအောက်မှာ၊ စိုစွတ်နေဆဲပဲ။ - ဒါငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလား ငါတကယ်အဝတ်လဲစရာရှိတယ် သငျသညျအခြို့လိုအပျပါလျှင်ဟိုမှာ။ - ဘာ? ငါဆိုလိုတာကမဟုတ်ဘူး။ - ဒီမှာ? - အဘို့, မေ့လျော့, မေ့လျော့။ သငျသညျအခြို့လိုအပျလြှငျ, ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့။ - အင်းဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းဒီနေ့ Ref လည်းဖြစ်မယ်။ ဂိမ်းသွားကြရအောင်။ ကောင်းပါပြီ! အလွန်ရိုးရှင်းသောစိန်ခေါ်မှု! သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးအဲဒီမှာစတင်ဖြစ်ပါသည်, ငါဒီပီပီမှုတ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာဆင်းသွား သင့်ရဲ့ကန်တော့ချွန်န်းကျင်နှင့်ပြန်လာ။ နောက်ကျောပထမအသင်း, အနိုင်ရရှိ။ သင်၏အမှတ်အသားများတွင်သတ်မှတ်ထားပါ။ - [Agent R] လာကင်၊ - မဟုတ်ပါ၊ - လာပါ! - အိမ်ပြန်၊ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဆီသွားမယ်၊ ဘယ်သူနိုင်ခဲ့တာလဲ။ - ငါမသိဘူး၊ ဒါကစိန်ခေါ်မှုပဲ။ - အင်း၊ အင်း၊ အဲဒါလုံးဝအရေးမကြီးဘူး မင်းဒါကိုသတ်ခဲ့တယ် - အားလုံးကောင်းတယ်၊ လူတိုင်းပြွန်တိပ်ကိုချွတ်နိုင်တယ်၊ နှင့်တရားစီရင်ခြင်းအဘို့ဤအရပ်၌ကျော်မတ်တပ်ရပ်။ - [Agent R] ကံကောင်းပါစေ။ အိုကေ, တရားသူကြီးတွေဒီတစ်ခုအပေါ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးတယ်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ကြောစီရင်နေကြသည်။ ဒါကအသင်းတစ်သင်း၊ အသင်းနှစ်သင်းနဲ့အသင်းသုံးဖွဲ့ပါ။ မင်းရှေ့ကိုသွားချင်တယ် ဘယ်အသင်းကအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ - အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလား။ အိုကေ။ - သင်ထင်မြင်ချက်ကိုအောက်တွင်ချရေးပါ အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ - ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ထုတ်ဖေါ်ကြပါစို့။ သုံးခု နှစ် တစ်ခု ထုတ်ဖေါ်! - အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့! - ကြည့်မယ်၊ ငါကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုမဲပေးတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ - သူတို့အားလုံး! - မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးကအနိုင်ရချင်ကြတယ်။ ကျနော်တို့အနိုင်ရစိတ်ထဲမထားဘူး။ - အနိုင်ရတာကအရာရာပဲ။ - တကယ်တော့၊ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်စရာတွေရှိတယ် အနိုင်ရရုံထက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ - အဲ၊ - အိုး - အိုကေ, ငါတို့ရှေ့ဆက်သွား set up ရမယ်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, အနိုင်ရအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ ခင်ဗျားယောက်ျားတွေမင်းရေလိုချင်ရင်ရနိုင်တယ်။ ကျနော်တို့ set up ရနေစဉ်, အခုပထမ ဦး ဆုံး လာမယ့်စိန်ခေါ်မှုအဘို့, အဆင်ပြေ? - ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ သင်အဲဒါကိုအစေခံနိုင်ပါတယ် - ကောင်းပြီ၊ ဒါကလက်ထိတ်ခတ်စိန်ခေါ်မှုပါ။ မင်းမှာစက္ကန့် ၆၀ လောက်ရှိတယ် ဦး နှောက်သည်သင့်အား ဦး နှောက်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ - သူတကယ်ပဲစောင့်ပါ၊ မစ္စတာ X ကဒီမှာလား။ - ဟုတ်တယ်၊ - ဘာ? - အိုကေလား ပြီးတော့၊ သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ သွား! - အိုးကပိုပြီးတင်းကျပ်လာတယ်။ ငါ့ရဲ့သူလျှိုကိရိယာကိုငါ့ရဲ့ Fanny အထုပ်ထဲမှာသိမ်းထားနိုင်တယ်။ - အိုဘုရားသခင်၊ BBR, လာစမ်းပါ၊ အိပ်နေလား? - ဘာလဲသိလား? ဒီဟာတွေကချစ်စရာကောင်းတယ် ဒီဟာတွေမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကော။ ဒါတွေကိုသိမ်းထားလို့ရမလား - အိုကေ! ဟင့်အင်း၊ ဒီဟာငါအနိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ - ငါဒီနေရာလေးကိုလာလိမ့်မယ်သိတယ်။ ဟုတ်တယ် ငါထွက်လာပြီ - မင်းထွက်သွားပြီ သူမသည်တကယ်တော့သူလျှိုတစ်ယောက်ပါ။ ငါသူလျှိုတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ - ဘာ? - စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဘယ်သူမှလက်ထိပ်ခတ်မယူရဘူး ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ - သူမလက်ထိတ်ခတ်မှထွက်လာသည်ကိုစောင့်ပါ။ - အင်း၊ ဒါကတကယ်မြန်တယ်။ - ပြီးတော့မင်းမှာသူလျှိုကိရိယာရှိတယ်။ မင်းအရင်လုပ်ပြီးပြီ - ဆိုလိုတာကငါတို့ရဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထဲကနေအမြဲတမ်းထွက်ရတယ်။ - အားလုံးအချိန်! - Matt, မင်းကိုမယုံတာဒါကြောင့်။ - အိုး, ဒီသဘာဝကျပါတယ်။ - ဟုတ်တာပေါ့၊ သူကမင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့စေရဘူး။ - ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ? - မင်းလုပ်ခဲ့တာငါသိတယ် - မတရားဘူး! - သူမဤသို့လုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ သူမတကယ်လေ့ကျင့်ရေးမဟုတ်လျှင်။ သူမကသူလျှိုတစ်ယောက်ပါ - ဒါပေမယ့်ဂိမ်းကစားနည်းကိုသူလျှိုလိုချင်တာလား။ - မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်၊ သင်တန်းပြီးသားတစ်စုံတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုမယုံနိုင်ပါ - မင်းအပြင်ထွက်နေတယ် - ဝိုး။ - ဒါဟာအဆိုးရွားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုပါ။ - သူမက GMI အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်လား ငါကုမ္ပဏီအတွက်လွှဲပြောင်းယူလိမ့်မယ်, ငါတို့အသစ်ကတပ်သားသစ်လိုအပ်ပါတယ်။ - အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ - ဟုတ်လား? - သူမတစ်ကိုယ်တည်းနေတယ်လို့ထင်လား - ကောင်းပါပြီ၊ စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသော၊ တကယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ သင်ဒီမှာနေတုန်းပဲ မင်းထွက်သွားပြီလို့ငါပြောတယ် - ကောင်းပြီ၊ ငါရေအနည်းငယ်ရမယ်ထင်တယ် သူမဟာကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာကဘာမှားလဲ သူမနည်းနည်းရူးသွပ်သည်အထိအေးမြခဲ့သည်။ - ဟုတ်၊ - ဒါအမှန်ပဲ၊ - Matt နောက်တစ်ခါစတိုးဆိုင်၌ဘာရှိတယ်လို့သင်ထင်သလဲ - ငါမသိရဘူး၊ အစဉ်အမြဲငါမြင်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေး။ Zam fam, သင်ထင်သောအရာကိုအောက်တွင်ချမှတ် ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသစ်ကိုရှာဖို့ Matt ကလုပ်သင့်တယ်။ ငါထင်တာကတော့ဒါမဟုတ်ဘူး။ - ဆိုလိုတာကမင်းပြောနိုင်တာမင်းကမင်းပဲလို့ပြောတယ် ပြီးသားတစ်စုံတစ် ဦး ကိုကောက်ယူခဲ့, ပြီးတော့ လုပ်ပါစေ၊ - အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ - သူပြောပြီးတာနဲ့ငါပြောပြမယ်၊ ဒါပေမယ့်သူ့ကိုသူ၏အခိုက်အကြကုန်အံ့ကြကုန်အံ့။ - အိုကေ။ - ရေဗက္ကာ၊ ဒီမှာလာ၊ လာ၊ ဒီမှာလာ၊ ဒီမှာလာ။ - အင်း? - ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရမလား ဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကခုန်? မြင့်မားတဲ့ hack သူလျှို? - အိုး, မြင့်မားတဲ့ hack မှိုသူလျှို? ဟုတ်တယ် - မင်းအဲဒီလိုလုပ်လို့ရလား သူတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ သူတို့ဖြစ်ကောင်းလည်းဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ - GAMASTE R. လိုပဲ - အိုကေ၊ ငါရတယ် ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကခုန်နိုင်ပါသည်။ ငါတို့ TikTok ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ - ဟုတ်တယ်၊ - ယောက်ျားတွေ, ဒီမှာလာ, ဒီမှာလာ, ဒီမှာလာ။ - ဘာ? - ငါအဲဒီမှာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမသိ။ - အင်း၊ - မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? - ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ် ဒါကအရမ်းကိုအေးတယ် - အင်း? - မင်းဒါကိုမင်းစီစဉ်ထားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ် အဲဒါကြောင့်ငါတို့သူတို့ကိုဒီမှာဆွဲခေါ်သွားတယ်၊ သူတို့အိပ်နေတဲ့အခါ၊ ပြီးတော့ - အင်း။ ငါဆိုလိုတာကငါဒါကိုစီစဉ်ခဲ့တယ် - အင်း၊ - ငါပီပီထုတ်ဆောင်ခဲ့။ - သူတို့ဘယ်လို hack ရမယ်ဆိုတာသိသလား။ ဟင့်အင်း၊ သူလျှိုသောက်ချင်တာကိုမလိုချင်ဘူး - ဟင့်အင်း၊ - ဒါမလိုချင်ဘူး - တူတူပုန်းတမ်း! - အစဉ်မပြတ်ဖုံးကွယ်နှင့်ရှာပါ။ - အဘယ်ကြောင့်? - တူတူပုန်းတမ်း။ - အိုးအိုကေ။ - လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုများပေါ်တွင်အရာအားလုံးကုန်ပစ္စည်းများ။ သူတို့တစ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လိုပဲ အခြေအနေကသူတို့ပုန်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ - ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ Mr. X ဆီကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေရင်ကော။ - အတိအကျ။ - သူတို့ဝှက်လို့မရဘူးဆိုရင် - ဒါမှမဟုတ်ဝံ။ - နောက်မှတွေ့မယ်။ - နုတ်ဆက်ပါတယ်။ - ဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ ဒီကခုန်တယ်လို့ငါထင်တယ် - အိုးသင်ရတယ် - ဟုတ်ကဲ့အိုး။ - ဂိမ်း - ထိုင်ခုံ့တဲ့သူဟေ့? ယောက်ျားတွေထိုင်ချင်ပါသလား - အိုး, ငါတို့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ - အခုလက်မလေးပေးပါ။ မင်းထင်ရင်ဒါကကောင်းတယ်။ ငါတို့ပုန်းနေပြီးဒီဥယျာဉ်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ - ဟုတ်လား? - ရေဗက္ကာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငါတို့မပြောနိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့အဆင်ပြေ, ငါတို့ Tesla အတွက်သူမ၏ရနိုင်မည်နည်း - ဟေ့ကောင်တွေ! - အင်း၊ - အိုဟုတ်တယ်။ - သင်မှန်ပါသည်၊ သင်မှန်ပါသည်၊ သင်မှန်ပါသည် ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်တော့ဒီနောက်စီစဉ်ထားရှိသည်။ - အံ့အားသင့်စရာလိုပဲ! - ငါတို့ကိုမင်း Tesla ကိုသွားစေချင်တယ်။ - ငါလား - အင်း၊ သင်ထွက်နေပြီ - အိုး! - သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထွက်သွား! - ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့နောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့တာပေါ့၊ မင်းကအသရေလဲနေတယ်။ - ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာအနည်းဆုံးတော့ရနိုင်ပါတယ် ကခုန်ခြင်းကတကယ်မြန်သလား - GAMEMASTERGMA ဘာ? - ဒါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ၊ - အိုကေ၊ အဆင်ပြေပါ၊ ကားကိုသွားပါ။ - တက်စလာတွင်ပုန်းရှောင်ပါ! - Zam Fam၊ သူတို့မယုံနိုင်ဘူး ငါ့ကို Tesla အတွင်းပိုင်းနေဖို့အောင် သူတို့သည်ငါ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသစ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေနေစဉ်။ Matt ကသူအခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလိုငါခံစားရတယ်။ - ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှဖယ်ရှားပစ်သလဲ - မဟုတ်ဘူး၊ - ငါမသိဘူး? - ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? - ငါတို့ရှာတွေ့ပြီ၊ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီလား။ - ဒါကစူပါလွယ်ကူတယ်လိုပဲ။ ငါဒီပန်းခြံထဲကဘယ်သူ့ကိုမှရှာနိုင်ဘူး - အင်း၊ ငါဆိုလိုတာကသေချာပါတယ် ငါဒီမှာအများကြီးပါပဲ။ - လိုပဲပြေးနေလား။ - ဟုတ်တယ်၊ - အဆင်ပြေပါတယ်။ - မင်းဒီပန်းခြံကိုရောက်ဖူးလား - ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဒီပန်းခြံကိုရောက်ဖူးတယ်။ ငါပန်းခြံတွေအများကြီးခဲ့ ငါဟိုမှာငါ့ဗီရိုတူပေမယ့်ကောင်းပြီ။ - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ ဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်။ - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ ဂိမ်းမာစတာ။ - GMI! - GMI! - လာပါ! အားလုံးကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာဖျော်ဖြေရေးအတွက်ပျော်စရာဂိမ်းကိုကစားမယ်။ မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းမဟာဗျူဟာတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်သလား။ - ကျွန်ုပ်၏နည်းဗျူဟာမှာအောက်ခံပုန်းအောင်းနေသည်။ - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော့်မှာအစီအစဉ်မရှိဘူး။ ငါသိသမျှအားလုံးကကျွန်မရဲ့ကလေး BBR ဟာအနားယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။ - ငါအဲဒီမှာသစ်ပင်တပင်၌ပုန်းရှောင်မယ်။ အကိုင်းအခက်တစ်ခုပေါ်သို့တက်ပြီးဆက်နေပါ။ - ငါပင်အတူတူပင်ပင်၌ပုန်းရှောင်ပေါ့။ မျှော်လင့်သူတို့သည်ငါ့ကိုဒုတိယရှာပါ။ - ဘာ? - ဒါဆိုဒီဆွဲထားတဲ့အင်္ကျီနောက်ကွယ်မှာပုန်းနေမယ် ငါပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ - ဒါက ၁၀ စက္ကန့်ပုန်းအောင်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုရှာလိမ့်မယ်။ သစ်ပင်ကိုကူးဖို့သင်လိုအပ်တယ်။ - ဘာ? - သူတို့ကသစ်ပင်ရှိနှင့်ပြီးသားလား - သင်သစ်ပင်သို့သွားရန်ရှိသည် - သစ်ပင်သို့သွား? - Yep! - ကောင်းပါပြီ။ - ကောင်းပါပြီ။ ငါတို့သစ်ပင်မှာမုန်လား? - ထိုအပင်၌မုန်မရှိပါ။ - ဘာ? - ကောင်းပြီ၊ ၁၀ စက္ကန့်စတင်သည်။ - သူတို့ပုန်းအောင်းနေပြီးရှာနေကြတာလား။ သူတို့ကအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ ငါအတွက်ပုန်းအောင်းကစားနေ ဒါကအစဉ်အဆက် cringiest အရာပါ! Zam Fam, မိန်းကလေးတ ဦး ကသူမခေါင်းပေါ်မှာတစ်မျိုးတည်းသာရှိနေသည်။ နှင့်အခြားရုံထိုင်နေသည်။ လိုပဲ, ဒါကအားလုံးဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်မရှာ! - ငါး။ - ငါး။ - လေး။ - လေး။ - သုံး။ - သုံး။ - နှစ်။ - နှစ်။ - တစ်ခု - တစ်ခု - သွား! - သွား! - ငါဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ဘူး Zam Fam၊ ဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့ရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ - အိုကေ။ အိုကေ၊ GMI သင်တန်း။ စောင့်ပါ, ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူခြေရှိပါတယ်။ ဒါကတစ်စုံတစ် ဦး ပဲ။ မင်းကိုတွေ့ပြီ သင်ထွက်နေပြီ သင်ထွက်နေပြီ ဟိုမှာပါ! - အိုး! အဆိုပါ drive ကို, GMI! - ဒါကရုံကန်တော့ချွန်ပဲ။ - ငါဘာလုံခြုံမှုရှိလဲ။ အိုအိုး၊ အိုကေ၊ နားထောင်၊ ငါဒီဝက်ဝံလို့ထင်ခဲ့တယ် ဒါဟာတကယ်လူတစ်ယောက်ပါ။ မင်းတွေ့ပြီ - မင်းတောင်မှပုန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး - သူငိုက်နေတယ်။ သူအနားယူရမယ်။ - အင်း၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမလွယ်ဘူး။ - Agent S၊ ဘယ်လောက်ရှာတွေ့ပါသလဲ။ - ငါနင့်ကိုတွေ့တယ်၊ - ပြန်လာ! - ဟေ့! - လူတိုင်းကိုတွေ့ပြီ။ - အင်း! - အင်း! - GMI! - GMI! - GMI! - ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့ပုန်းနေတဲ့နေရာကအရမ်းကောင်းတယ်။ - သင်ယောက်ျားတွေကတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ - အင်း၊ ငါမင်းပုန်းနေတာကိုး။ အဲဒါပြီးပြည့်စုံတယ် - ဘုရား၊ ကျေးဇူးပါဘုရား။ - ပြီးတော့ငါမြက်ပင်တစ်ပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ - ကောင်းပြီ၊ အဲဒါပုန်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုရှာဖွေတယ်။ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ်၊ ဒါကဘယ်သူမျှမဆိုရမှတ်သွင်းယူတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်, မည်သူမျှမည်သည့်အချက်မျှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ၊ - ငါအဆင်ပြေလားငါ့ကြွက်နို့သောက်ဖို့သွားရမလား။ - အိုးဘာကြောင့်လဲ - သူကရေငတ်တယ်။ - [သူလျှိုယောက်ျား] ရေပေါ်မှာလား - ယောက်ျားတွေ၊ ငါလာမယ့်စိန်ခေါ်မှုအတွက်ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ - အိုး၊ - အင်းဘာလဲ - နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်မှု, တော်ဝင်လေ့ကျင့်ရေးစစ်တိုက်။ အကောင်းဆုံး Ninja လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်သူမြင်တာလဲ။ - ဘုရားရေ။ - အကောင်းဆုံးလေးအနိုင်ရရှိ? - ကောင်းပြီ၊ နှေးနှေးစွာလုပ်ဆောင်ပါ။ အရာအားလုံးနှေးကွေးနေအတွက်ပိုကောင်း! - အင်းအို အေးပါတယ် - သင်အဆင်သင့်ပဲ။ - အင်း! - အိုကေ၊ - တော်ဝင်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကိုတိုက်။ အကောင်းဆုံး Ninja လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်သူမြင်တာလဲ။ ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းမရှိ, ငါ့ကိုလာမမြင်နိုင်အလောင်းအစား ဒါအရမ်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြီးလွန်းတယ်။ ငါ slick ကပြောသည်! ယောက်ျားတွေများများရှိလား ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ်ကန်, ခုန်ကန်? - အင်း။ - အင်း။ - အိုကေ၊ ငါတို့ဘယ်သူ့မှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ ဒီအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ - အိုကေ၊ တော်ဝင်စစ်တိုက်! - ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုသင်ကသင်၏ scorecard ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ ငါတို့သူတို့ကိုအခြေခံပြီးဂိုးသွင်းမယ်။ - အိုကေ၊ - ဝါး! - သင်ဘာလုပ်နေလဲ? မင်းငါ့ကိုဟိုမှာပဲရှိတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ် - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကနည်းလမ်းသုံးမျိုးနဲ့တရားစီရင်မှာပါ။ မြန်နှုန်း, အမြင့်နှင့်သွက်လက်။ - အိုကေ။ - အိုကေ၊ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ - အားလုံးကောင်းပြီ၊ - ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းတယ်၊ - ငါစဉ်းစားနေတာက ငါဒါလုပ်မယ် - ငါဘာလုပျမလဲ - အိုး! - အိုကေ! - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ - အင်း၊ - မင်းသိတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုကျိန်းသေပေါက်ကျသွားနိုင်တယ်။ - ဟုတ်ကဲ့၊ သူမ၏အရာတစ်ခုလုံးငါတူလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီးနင်သိလား - [Agent S] အိုကေ၊ အဆင်ပြေပါသည်။ ငါဂိုးသွင်းမယ်၊ ငါဂိုးသွင်းမယ်။ - သူတို့ကရာတေးလှုပ်ရှားနေပုံရသလား။ ဒါက Ninja ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တူလား။ ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်မှ Ninja သင်တန်းမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ - ဒါက Ninja လားဒါမှမဟုတ်ဘဲလေးလိုလား။ - [အေးဂျင့် R] ဒါကဖြစ်ခဲ့သည်။ - အလွန်ယဉ်။ - အိုကေ၊ ငါလုပ်နေတာကိုငါသိတယ် - အိုကေ, ကလေးထမ်းရွက်ကြွက်, သင်ခံစားရလိမ့်မယ် နည်းနည်းခုန်သော်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ - ကောင်းပါပြီ? - မင်းသူမကိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာလဲ။ - အမြင့်ရှိတယ်၊ အမြင့်ရှိတယ်။ ပြီးတော့, တူ, ဆင်း။ - ဒါဟာ yeah bom ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ သငျသညျမယ်လျှင်သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ပါတယ် မင်းသူမရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လား - ဟုတ်တယ်၊ သေချာတာပေါ့။ - ဟေးငါ့ဖုန်းဘယ်မှာလဲ။ ဖုန်းကိုငါ့မှာထားခဲ့တာလား - ဟိုင်းဟား! - အိုး, သူမငယ် Boop လုပ်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့တစ် kachow သူမဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ yeah? - အင်း၊ - အဲဒါကောင်းတယ်! - ဘာလဲသိလား? ဒီတက်စလာမှာနေရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး ငါပြောသင့်တယ်နဲ့တူငါခံစားရတယ် ဘယ်သူကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်မလဲ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ အဆိုးရွားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကို ဒါနဲ့ငါထွက်အဲဒီမှာရမယ်။ - အားလုံးကောင်းတယ်၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးများ - ဟယ်လို? သင်တို့ကိုငါမေ့လျော့ယောက်ျားတွေ, ငါ Tesla ၌ရှိ၏။ - အိုဟုတ်တယ်! - အိုဟုတ်တယ်! - မင်းကိုလုံးဝမေ့သွားတယ် - အိုကေ၊ ငါ့ဖုန်းမရှိခဲ့ဘူး။ - အိုး! - အိုး! - ဒါကပျော်စရာကြီး။ - ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးရမှတ်များကိုပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ အဘယ်သူသည်ပေါ်ရွေ့လျားနေသည်နှင့်အဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မည် ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီလား - ပယ်ဖျက်ခဲ့လား - ငါဒါကိုသုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ - ဝါး! - ဝါး! - 13, 13, 10, 13, 13 ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထွက်သွားပြီဖြစ်သည် - ဘာ? သူမကို သူမသည်မြေပေါ်မှာကပ်ခဲ့သည်! ကောင်းကင်တမန်များအားရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ သင်နှင့်သင်၏ဝက်ဝံကြွက်သည်မည်သူမျှမကြိုက်ပါ။ သင်! မင်းကအေးတယ်၊ ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ်။ ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ်။ - ငါအများကြီးလွဲချော်တူသောငါခံစားရတယ်? - ဒါကဘာလဲဆိုတာငါမသိ။ - အဲ? - ငါခံစားရတယ်ဟေး! - သူမပါသေးသေး၊ - ပြန်လာသည်! - ဒါကမင်းရဲ့ပုံပဲ။ - ရေဗက္ကာဝါ။ - [Agent S ကို] အိပ်စက်ခြင်းမိုcloud်းတိမ်ကိုရယူပါ! - ဒါပေမယ့်ငါကြင်နာသူမ၏ဆံပင်ကြိုက်တယ်! ဒါဟာတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းပေမယ့်သူမကအရူးပဲ! - သူမကအရူးပဲ! - ဝိုး! - အိုကေ။ - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူမဟာသူရဲကောင်းနီလိုငါ့ကိုသတိရစေတယ်။ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မချစ်နိုင်လျှင်မည်သူမျှမလုပ်နိုင်ပါ။ ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။ - နည်းနည်းရပြီ - မင်းဒါကိုမှတ်မိလား ငါကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့သည်။ - ကြောင်းချိန်းတွေ့ဂိမ်းကာလအတွင်း? - ယောက်ျားတွေလား ဒီဟာကတစ်ခုခု (သို့) တစ်ခုခုကိုရေဖိတ်ခဲ့သလား၊ ငါ့ဖုန်းမှာတစ်ခုခုမှားယွင်းမှုဖြစ်စေတယ်
REBECCA ၏ဖုန်းသည် Hack ခံရသည်။ (၂၄ နာရီအသုံးချအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ GAME MASTER သူလျှိုလေ့ကျင့်ရေးထုတ်ဖော်ပြသခြင်း)
< start="0.13" dur="1.28"> - Matt နှင့် Rebecca ရုပ်သံလိုင်းသို့ပြန်လာပါ။ >
< start="1.41" dur="2.14"> ကျနော်တို့ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေးလုပ်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ >
< start="3.55" dur="1.876"> - လျင်မြန်စွာ။ - ငါတို့ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ။ >
< start="5.426" dur="0.833"> မိန်းကလေးများအိပ်ပျော်နေကြသည်။ >
< start="6.259" dur="1.211"> - အင်း၊ ဒီဟာငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သင့်တယ်။ >
< start="7.47" dur="1.713"> - စောင့်ပါ။ သူတို့အားလုံးသည် Tesla တွင်မည်သို့မည်ပုံနေထိုင်ကြမည်နည်း။ >
< start="9.183" dur="0.833"> - သူတို့ကသင့်တော်ပါတယ် >
< start="10.016" dur="2.267"> - အိုး, gosh, ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ >
< start="15.92" dur="1.27"> - အားလုံးကောင်းပြီ၊ သူတို့ကဒီမှာမကြာမီနိုးလာမှာပါ၊ >
< start="17.19" dur="1.43"> ဒါကြောင့်ငါတို့အရာအားလုံးကို set up ရသင့်တယ် >
< start="18.62" dur="0.85"> ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေး။ >
< start="19.47" dur="1.053"> အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား >
< start="20.523" dur="0.833"> - နင့်ကိုငါထင်ထားပြီ၊ >
< start="21.356" dur="0.833"> သင့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းရွေးချယ်လိုက်သည် >
< start="22.189" dur="1.721"> - ငါဆိုလိုတာကငါလုပ်ခဲ့တာပဲ၊ >
< start="23.91" dur="1.36"> ငါကြင်ကြင်နာနာသူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုကြည့်ချင်တယ် >
< start="25.27" dur="1.33"> ဂိမ်းမာစတာသူလျှိုသင်တန်း၊ >
< start="26.6" dur="1.58"> နောက်ဆုံးမှာဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကိုချိတ်ဆက်။ >
< start="28.18" dur="1.072"> - အိုး။ >
< start="29.252" dur="0.833"> - [ကင်မရာသမား] အိုကေ၊ >
< start="30.085" dur="0.833"> - ကောင်းပြီ, ငါတစ်မျိုးကတော့အားလုံးရသွားတော့မယ် >
< start="30.918" dur="1.666"> ပတ်ပတ်လည်တစ်ခုအဘို့ကို set up, အဆင်ပြေ? - နံပါတ် ၁ ကိုစိန်ခေါ်ပါ။ >
< start="32.584" dur="0.833"> - နင်ယောက်ျားတွေ၊ သူတို့ကိုနိုးလာတာတွေစတင်လုပ်နေကြတယ်။ >
< start="33.417" dur="1.357"> ငါတို့မကြာခင်ဒီလိုလုပ်ဖို့လိုသလား? - ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ >
< start="34.774" dur="1.036"> - နေဝင်တော့မယ်။ >
< start="35.81" dur="1.03"> - ငါကလူတွေကိုမဆွဲတော့ဘူး။ >
< start="36.84" dur="1.41"> - အိုကေ။ သငျသညျယောက်ျားတွေထင်သောအေးဂျင့် >
< start="38.25" dur="1.68"> နှင့် Matt တစ်သွန်းတက် setting ခဲ့ကြသည် >
< start="39.93" dur="2.87"> ငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသစ်ကိုရှာပါ၊ >
< start="42.8" dur="1.62"> မုသားရှာဖွေရေးစက်ရောနှောခြင်းကိုအစား >
< start="44.42" dur="1.81"> Matt အိပ်စက်ခြင်းမိုcloud်းတိမ်ကိုတင်, ဒါကြောင့်ငါ့အလိုရှိသမျှ >
< start="46.23" dur="2.22"> အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများသည်အိပ်ပျော်နေကြသည်၊ >
< start="48.45" dur="1.15"> သူတို့နိုးလာလိမ့်မယ်။ >
< start="49.6" dur="1.286"> Matt, ငါတို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="50.886" dur="0.833"> - [Matt] ဟုတ်တယ်၊ >
< start="51.719" dur="1.741"> - အိုကေ၊ ဒါဆိုမင်းကဘယ်သူ့ကိုအောက်မှာမှတ်ချက်ပေးတာလဲ >
< start="53.46" dur="1.65"> မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်သင့်တယ်လို့မင်းထင်တယ် >
< start="55.11" dur="3.009"> ပြီးတော့ဘယ်သူ့ကိုမှမသင်္ကာစရာတစ်ခုခုလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုငါ့ကိုအသိပေးပါ။ >
< start="58.119" dur="1.864"> ငါတို့အားလုံးကိုနိုးထလိုက်တယ်။ >
< start="59.983" dur="2.009"> - ကျွန်တော်ဒီကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့တာလဲ - ငါတို့ဘာကြောင့်ပန်းခြံမှာနေရတာလဲ >
< start="61.992" dur="1.118"> - မင်းတို့ယောက်ျားတွေမမှတ်မိဘူးလား >
< start="63.11" dur="2.403"> ငါတို့လမ်းလျှောက်ပြီးငါတို့အားလုံး Slurpees ရခဲ့တယ်။ >
< start="65.513" dur="1.209"> - Slurpees ။ - Slurpees ။ >
< start="66.722" dur="2.19"> - ဟုတ်တယ်၊ လူတိုင်းလိုပဲ "ဟုတ်တယ်၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ကြရအောင်!" >
< start="68.912" dur="0.833"> ပြီးတော့ ။ >
< start="69.745" dur="0.833"> - သင်မှတ်မိပါသလား? >
< start="70.578" dur="0.833"> - သင်မှတ်မိပါသလား? >
< start="71.411" dur="0.833"> - အင်း။ >
< start="72.244" dur="0.833"> - ဒါဟာချယ်ရီကိုကာကိုလာပါ။ >
< start="73.077" dur="1.04"> - အိုးကြည့် >
< start="74.117" dur="0.863"> - ချယ်ရီကိုကာကိုလာ။ - အင်း။ >
< start="74.98" dur="1.14"> - ငါတို့ကိုမင်းတိုကိုဘဲလ်ကိုခေါ်သွားတယ်၊ >
< start="76.12" dur="1.383"> သူတို့ကငါတို့ကိုဒီစောင်ပေးတယ် >
< start="77.503" dur="1.707"> ယောက်ျားတွေကမင်းနင့်ကိုအိပ်ချင်နေတယ်။ >
< start="79.21" dur="0.833"> - ဒါပဲကောင်းတယ်, မော။ >
< start="80.043" dur="0.833"> - သင်တန်းမတက်မီ။ >
< start="80.876" dur="1.374"> - Matt၊ သင်အကောင်းဆုံးကိုရှင်းပြသင့်သည် >
< start="82.25" dur="1.39"> ငါတို့လုပ်နေတာသူငယ်ချင်း >
< start="83.64" dur="1.09"> - ငါတို့လုပ်သင့်သောပထမ ဦး ဆုံးအရာဖြစ်သည် >
< start="84.73" dur="1.6"> သငျသညျယောက်ျားများတက်နှစ်ခုအဖွဲ့များသို့ခွဲ။ >
< start="86.33" dur="1.24"> ကျေးဇူးပြု၍ ကြွက်နှင့်အတူနေလို့ရနိုင်မလား? >
< start="87.57" dur="1.062"> - မဟုတ်ပါ၊ နံပါတ် >
< start="88.632" dur="1.598"> - ဒါကလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်မရေတွက်ပါဘူး။ >
< start="90.23" dur="1.288"> လိုပဲရုံတက်တွဲ။ >
< start="91.518" dur="0.833"> - တွဲဖက်! >
< start="92.351" dur="1.117"> - အင်း။ - သူမ၏အိတ်ကပ်ထဲမှာထည့်ထား? >
< start="93.468" dur="0.833"> - ဟုတ်ကဲ့! >
< start="94.301" dur="0.833"> - နောက်အရာ, ငါတို့ဤလမ်းကိုကျော်လမ်းလျှောက်မယ်။ >
< start="95.134" dur="1.666"> ယောက်ျားတွေလာစမ်းပါ။ ငါအခုဒီအလုပ်ဖြစ်တယ်မျှော်လင့်ပါတယ် >
< start="96.8" dur="0.833"> ဘယ်သူလဲဆိုတာအတိအကျသိဖို့လိုတယ် >
< start="97.633" dur="1.666"> အကောင်းဆုံးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ - ငါတို့ပိုကောင်းတဲ့အနိုင်ရချင်တယ် >
< start="99.299" dur="0.833"> - ငါသိတယ်။ >
< start="100.132" dur="1.088"> - ငါတို့တကယ်ချယ်ရီကိုကာကိုလာရ? >
< start="101.22" dur="0.833"> - ငါမသိဘူး၊ ငါအိမ်ပြန်ချင်တယ်။ >
< start="102.053" dur="1.807"> - အဲဒီမှာကြွက်တစ်ကောင်ရှိလား။ >
< start="103.86" dur="1.18"> - ဟုတ်၊ မင်းမြင်ချင်တာလား >
< start="105.04" dur="1.88"> - ကောင်းပြီ၊ မင်းတို့ဒီပထမဆုံးစိန်ခေါ်မှုအတွက် >
< start="106.92" dur="2.09"> အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနှင့်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုအကောင်းဆုံးတွက်ဆနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ >
< start="109.01" dur="1.73"> မင်းရေဗက္ကာရဲ့ BFF ဖြစ်မယ်ဆိုရင်၊ >
< start="110.74" dur="0.833"> ထို့နောက်သင်သည်အလုပ်လုပ်ရန်ရှိသည် >
< start="111.573" dur="1.157"> အတူတူတကယ်ကောင်းကောင်းအတူ။ >
< start="112.73" dur="1.05"> - ဒါရေဗက္ကာလား။ >
< start="114.7" dur="0.874"> - မင်းသူတို့ကိုမပြောသေးဘူးလား - အင်း? >
< start="115.574" dur="0.876"> - မဟုတ်ဘူး၊ ငါ ... - ဘာလဲ >
< start="116.45" dur="1.375"> - ငါရေဗက္ကာပါ >
< start="117.825" dur="1.329"> - ရေး! - ရေး! >
< start="119.154" dur="1.211"> - ငါတို့လက်ခုပ်တီးတယ် >
< start="120.365" dur="2.038"> - ငါတို့စီစဉ်ထားသည့်အတိုင်းတိတိကျကျဖော်ပြသည်။ >
< start="122.403" dur="1.257"> ငါလုံးဝအလုပ်မလုပ်ဘူး >
< start="123.66" dur="1.54"> - အိုကေဒါ၊ ငါတို့အခုငါတို့လုပ်နေကြတာ >
< start="125.2" dur="1.84"> ငါတို့အသင်းနှစ်ခုမှာမင်းရှိနေပြီ။ >
< start="127.04" dur="1.78"> ခင်ဗျားတို့အဖွဲ့အနေနဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲ >
< start="128.82" dur="2.02"> ပြွန်ပြွန်ဖြင့်သင်၏ခြေကိုအတူတကွကပ်ပါ။ >
< start="130.84" dur="0.833"> ယောက်ျားတွေအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား >
< start="131.673" dur="0.833"> - မင်းကိုကူညီမယ် - အင်း၊ >
< start="132.506" dur="1.294"> - ငါဒီမှာစက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လိုနေလား။ >
< start="133.8" dur="2.722"> - အိုကေ၊ ဘယ်သူနိုင်မှာလဲ။ >
< start="136.522" dur="0.833"> - အဲဒီမှာနောက်ကျော။ >
< start="137.355" dur="0.833"> - စိတ်မပူပါနဲ့၊ ရှင်းပြပါ့မယ်။ >
< start="138.188" dur="0.833"> - အိုကေ! >
< start="139.021" dur="0.833"> - အိုကေ၊ ဒီမိန်းကလေးအားလုံးကိုကျွန်မအခုမယုံဘူး။ >
< start="139.854" dur="1.616"> သူတို့ထဲကတချို့ဟာအနည်းငယ်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ >
< start="141.47" dur="1.43"> သူတို့ထဲကတစ်ယောက်က Mr. X အတွက်လုပ်နေတယ်။ >
< start="142.9" dur="0.86"> ငါတို့မှာစိတ်ကူးမရှိဘူး။ >
< start="143.76" dur="1.4"> အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်အပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။ >
< start="145.16" dur="1.51"> ရေဗက္ကာရဲ့ဗီဒီယိုမှာမင်းတစ်ခုခုတွေ့ခဲ့ရင် >
< start="146.67" dur="1.94"> ဒီမှာ, ငါသူလျှိုရှိသည်တွေ့နိုင်ပါသည် >
< start="148.61" dur="0.92"> ငါလှိမ့်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်းကင်မရာ။ >
< start="149.53" dur="2.87"> တရားသူကြီးသုံး ဦး စလုံး၊ ရေဗက္ကာ၊ >
< start="152.4" dur="1.35"> နှင့် Agent S ကိုဒီမှာထိုင်လိမ့်မည် >
< start="153.75" dur="0.88"> သူတို့ကိုသူတို့ရဲ့ကျောနှင့်အတူ။ >
< start="154.63" dur="1.814"> ရေဗက္ကာရဲ့ဖုန်းကဒီမှာဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="156.444" dur="1.306"> - စိန်ခေါ်မှုများသည်အလွန်ပင်ပန်းသည်။ >
< start="157.75" dur="1.19"> သူတို့ဒီမှာလာပြီးရေကိုယူမယ်။ >
< start="158.94" dur="2.54"> သူတို့ထဲကတစ်ယောက်ကမခံနိုင်ဘူးဆိုတာငါသိတယ် >
< start="161.48" dur="1.97"> ရေဗက္ကာ၏ဖုန်းကိုယူရန်သွေးဆောင်သည်။ >
< start="163.45" dur="2.2"> မည်သူ့ကိုသံသယ ၀ င်သည်ကိုအောက်တွင်ချမှတ်ထားပါ။ >
< start="165.65" dur="1.23"> ဒါ့အပြင်ဒီဗီဒီယိုကိုပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ >
< start="166.88" dur="2.72"> လက်မလျှော့ပါ၊ စာရင်းသွင်းပါ၊ သတိပေးချက်များကိုဖွင့်ပါ၊ အားလုံးကိုနှိပ်ပါ။ >
< start="169.6" dur="1.41"> သငျသညျပွုပါလျှင်သူတို့ပြွန်တိပ်တယ်မီ >
< start="171.01" dur="2.13"> သူတို့ရဲ့ခြေထောက်ပေါ်, ပြွန်တိပ်ကစားမှတ်ချက်ပေး။ >
< start="173.14" dur="0.833"> ပြန်ရအောင် >
< start="173.973" dur="2.267"> - အားလုံးကောင်းပြီ၊ လူတို့၊ >
< start="176.24" dur="0.833"> နည်းနည်းပဲ။ >
< start="177.073" dur="0.972"> - [မိန်းမ] နည်းနည်းပဲ။ >
< start="178.878" dur="0.833"> - ဒါကပြွန်တိပ်တွေလိုအများကြီးပါ။ >
< start="179.711" dur="2.129"> - အိုး၊ မင်းသိတယ်၊ >
< start="181.84" dur="1.554"> - ဒါပေမယ့်လည်းငါတတစ်ခုတည်းကိုပြု၏။ >
< start="183.394" dur="0.833"> အေးဆေးနေလား >
< start="184.227" dur="0.833"> အဲဒါကောင်းလား >
< start="185.06" dur="0.943"> - နောက်ထပ်လိုအပ်စရာရှိသေးတယ်၊ ငါမသိဘူး >
< start="186.003" dur="0.833"> - ဘယ်သူသိနိုင်မလဲ? >
< start="186.836" dur="0.893"> - ငါကဒါ့့ဒဏ်ငွေဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ >
< start="187.729" dur="1.498"> - ငါအသင်း၏အနိုင်ရလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ် >
< start="189.227" dur="1.723"> ငါအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြွန်တိပ်အလုပ်ကိုပြု၏။ >
< start="190.95" dur="2.08"> နားထောင်နိုင်၊ လေခတ်တယ်။ >
< start="193.03" dur="2.64"> အပြုသဘော, အလင်းပြွန်တိပ်။ ငါ့အသင်းဒီတစ်ခုအနိုင်ရတာပါ။ >
< start="195.67" dur="2.68"> တကယ်တော့ကျွန်တော့်အသင်းသည်ဒီအသင်းကိုအနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် >
< start="198.35" dur="1.46"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါတို့မှာနှစ်ခုရှိတယ် >
< start="199.81" dur="2.27"> တကယ်တော့ဒီအဖွဲ့မှာသုံးခုရှိတယ်။ >
< start="202.08" dur="1.64"> ငါတို့မှာဝက်ဝံကြွက်ရှိတယ်။ >
< start="203.72" dur="2.067"> - လူတိုင်းကိုခန့်ထားကြစို့။ >
< start="205.787" dur="0.863"> - အိုကေ၊ ငါမပြောခဲ့တာကအဲဒါပဲ >
< start="206.65" dur="1.86"> ရေဗက္ကာသည်သင့်ကိုစစ်ကြောစီရင်သည်သာမက၊ >
< start="208.51" dur="2.122"> Agent R နှင့် Agent S. တို့သည်လည်း >
< start="210.632" dur="1.529"> - အင်း! - အင်း၊ GMI! >
< start="212.994" dur="1.256"> - သူတို့ကကျိန်းသေသိပါလိမ့်မယ် >
< start="214.25" dur="1.499"> အဘယ်သူသည်ငါ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်လိမ့်မည်။ >
< start="215.749" dur="0.833"> - မင်းသုံးယောက်လုံးဘာလို့မလုပ်တာလဲ >
< start="216.582" dur="1.535"> ဒီတော့ရှေ့ဆက်နှင့်အဆင်ပြေ, သင့်ထိုင်ခုံယူ? >
< start="218.117" dur="0.833"> - ဟမ်? - အိုကေ! >
< start="218.95" dur="0.833"> - ဒီမှာပြီးပြီ။ >
< start="219.783" dur="1.37"> - [Agent S] ကောင်းပါပြီ။ - [Agent R ကိုကြည့်ပါ။ >
< start="221.153" dur="1.804"> - အားလုံးကောင်းပြီ၊ ပိုက်ဆံကကြွက်မဟုတ်ဘူး။ >
< start="222.957" dur="0.893"> - ဒီနီးပါးဖဲ့! >
< start="223.85" dur="2.03"> အိုကေငါပြောင်းလို့ရလို့ဝမ်းသာတယ် >
< start="225.88" dur="1.2"> ကြောင်းစားဆင်ယင်ထဲကနောက်ပြောင်မှုများ။ >
< start="227.08" dur="1.83"> စိုစွတ်နေတယ်၊ ​​ဒါပေမဲ့ဒီချွေးထွက်အင်္ကျီအောက်မှာ၊ >
< start="228.91" dur="2.073"> စိုစွတ်နေဆဲပဲ။ - ဒါငါ့ရဲ့အစိတ်အပိုင်းလား >
< start="230.983" dur="0.947"> ငါတကယ်အဝတ်လဲစရာရှိတယ် >
< start="231.93" dur="0.833"> သငျသညျအခြို့လိုအပျပါလျှင်ဟိုမှာ။ - ဘာ? >
< start="232.763" dur="2.087"> ငါဆိုလိုတာကမဟုတ်ဘူး။ - ဒီမှာ? >
< start="234.85" dur="0.91"> - အဘို့, မေ့လျော့, မေ့လျော့။ >
< start="235.76" dur="1.45"> သငျသညျအခြို့လိုအပျလြှငျ, ငါ့ကိုသိကြကုန်အံ့။ >
< start="237.21" dur="2.03"> - အင်းဟုတ်တယ်၊ ငါလည်းဒီနေ့ Ref လည်းဖြစ်မယ်။ >
< start="239.24" dur="1.26"> ဂိမ်းသွားကြရအောင်။ >
< start="240.5" dur="0.833"> ကောင်းပါပြီ! >
< start="241.333" dur="0.833"> အလွန်ရိုးရှင်းသောစိန်ခေါ်မှု! >
< start="242.166" dur="1.354"> သငျသညျလုပ်ဖို့ရှိသည်အားလုံးအဲဒီမှာစတင်ဖြစ်ပါသည်, >
< start="243.52" dur="1.73"> ငါဒီပီပီမှုတ်လိုက်တာနဲ့အဲဒီမှာဆင်းသွား >
< start="245.25" dur="1.2"> သင့်ရဲ့ကန်တော့ချွန်န်းကျင်နှင့်ပြန်လာ။ >
< start="246.45" dur="1.38"> နောက်ကျောပထမအသင်း, အနိုင်ရရှိ။ >
< start="247.83" dur="1.393"> သင်၏အမှတ်အသားများတွင်သတ်မှတ်ထားပါ။ >
< start="250.658" dur="1.238"> - [Agent R] လာကင်၊ >
< start="257.366" dur="0.833"> - မဟုတ်ပါ၊ - လာပါ! >
< start="258.199" dur="2.481"> - အိမ်ပြန်၊ အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဆီသွားမယ်၊ >
< start="260.68" dur="1.06"> ဘယ်သူနိုင်ခဲ့တာလဲ။ >
< start="261.74" dur="0.98"> - ငါမသိဘူး၊ ဒါကစိန်ခေါ်မှုပဲ။ >
< start="262.72" dur="1.689"> - အင်း၊ အင်း၊ အဲဒါလုံးဝအရေးမကြီးဘူး >
< start="264.409" dur="0.848"> မင်းဒါကိုသတ်ခဲ့တယ် >
< start="265.257" dur="1.593"> - အားလုံးကောင်းတယ်၊ လူတိုင်းပြွန်တိပ်ကိုချွတ်နိုင်တယ်၊ >
< start="266.85" dur="1.73"> နှင့်တရားစီရင်ခြင်းအဘို့ဤအရပ်၌ကျော်မတ်တပ်ရပ်။ >
< start="268.58" dur="0.833"> - [Agent R] ကံကောင်းပါစေ။ >
< start="270.56" dur="2"> အိုကေ, တရားသူကြီးတွေဒီတစ်ခုအပေါ်အနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးတယ်, >
< start="272.56" dur="1.15"> ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစစ်ကြောစီရင်နေကြသည်။ >
< start="273.71" dur="1.78"> ဒါကအသင်းတစ်သင်း၊ အသင်းနှစ်သင်းနဲ့အသင်းသုံးဖွဲ့ပါ။ >
< start="275.49" dur="1.59"> မင်းရှေ့ကိုသွားချင်တယ် >
< start="277.08" dur="2.06"> ဘယ်အသင်းကအကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါသလဲ >
< start="279.14" dur="1.24"> - အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုလား။ အိုကေ။ >
< start="280.38" dur="1.51"> - သင်ထင်မြင်ချက်ကိုအောက်တွင်ချရေးပါ >
< start="281.89" dur="1.79"> အကောင်းဆုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ - ရဲ့ရှေ့ဆက်သွားနှင့်ထုတ်ဖေါ်ကြပါစို့။ >
< start="283.68" dur="1.363"> သုံးခု >
< start="285.043" dur="0.833"> နှစ် >
< start="285.876" dur="0.833"> တစ်ခု >
< start="286.709" dur="0.833"> ထုတ်ဖေါ်! >
< start="287.542" dur="1.666"> - အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့! - ကြည့်မယ်၊ ငါကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုမဲပေးတယ်၊ >
< start="289.208" dur="1.782"> ဘာလို့လဲဆိုတော့ - သူတို့အားလုံး! >
< start="290.99" dur="1.524"> - မဟုတ်ပါ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့အားလုံးကအနိုင်ရချင်ကြတယ်။ >
< start="292.514" dur="1.931"> ကျနော်တို့အနိုင်ရစိတ်ထဲမထားဘူး။ - အနိုင်ရတာကအရာရာပဲ။ >
< start="295.9" dur="1.72"> - တကယ်တော့၊ ဒါပေမယ့်ဒီထက်ပိုပြီးလုပ်စရာတွေရှိတယ် >
< start="297.62" dur="1.77"> အနိုင်ရရုံထက်အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ >
< start="299.39" dur="1.47"> - အဲ၊ - အိုး >
< start="300.86" dur="1.58"> - အိုကေ, ငါတို့ရှေ့ဆက်သွား set up ရမယ်။ >
< start="302.44" dur="1.76"> အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့, အနိုင်ရအပေါ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။ >
< start="304.2" dur="1.35"> ခင်ဗျားယောက်ျားတွေမင်းရေလိုချင်ရင်ရနိုင်တယ်။ >
< start="305.55" dur="1.69"> ကျနော်တို့ set up ရနေစဉ်, အခုပထမ ဦး ဆုံး >
< start="307.24" dur="1.587"> လာမယ့်စိန်ခေါ်မှုအဘို့, အဆင်ပြေ? >
< start="308.827" dur="1.143"> - ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီး။ >
< start="309.97" dur="0.881"> သင်အဲဒါကိုအစေခံနိုင်ပါတယ် >
< start="325.127" dur="1.413"> - ကောင်းပြီ၊ ဒါကလက်ထိတ်ခတ်စိန်ခေါ်မှုပါ။ >
< start="326.54" dur="2.32"> မင်းမှာစက္ကန့် ၆၀ လောက်ရှိတယ် >
< start="328.86" dur="2.06"> ဦး နှောက်သည်သင့်အား ဦး နှောက်ဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများကိုပေးလိမ့်မည်။ >
< start="330.92" dur="1.26"> - သူတကယ်ပဲစောင့်ပါ၊ မစ္စတာ X ကဒီမှာလား။ >
< start="332.18" dur="0.972"> - ဟုတ်တယ်၊ >
< start="333.152" dur="0.833"> - ဘာ? - အိုကေလား >
< start="333.985" dur="1.48"> ပြီးတော့၊ သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ >
< start="335.465" dur="0.833"> သွား! >
< start="338.82" dur="1.29"> - အိုးကပိုပြီးတင်းကျပ်လာတယ်။ >
< start="340.11" dur="2.24"> ငါ့ရဲ့သူလျှိုကိရိယာကိုငါ့ရဲ့ Fanny အထုပ်ထဲမှာသိမ်းထားနိုင်တယ်။ >
< start="342.35" dur="2.05"> - အိုဘုရားသခင်၊ BBR, လာစမ်းပါ၊ >
< start="344.4" dur="1.119"> အိပ်နေလား? >
< start="345.519" dur="0.833"> - ဘာလဲသိလား? >
< start="346.352" dur="0.833"> ဒီဟာတွေကချစ်စရာကောင်းတယ် >
< start="347.185" dur="2.054"> ဒီဟာတွေမလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ကော။ ဒါတွေကိုသိမ်းထားလို့ရမလား >
< start="349.239" dur="1.074"> - အိုကေ! >
< start="350.313" dur="2.14"> ဟင့်အင်း၊ ဒီဟာငါအနိုင်ယူမှာမဟုတ်ဘူး။ >
< start="354.731" dur="2.719"> - ငါဒီနေရာလေးကိုလာလိမ့်မယ်သိတယ်။ >
< start="357.45" dur="1.05"> ဟုတ်တယ် >
< start="358.5" dur="1.028"> ငါထွက်လာပြီ >
< start="359.528" dur="1.352"> - မင်းထွက်သွားပြီ >
< start="360.88" dur="1.25"> သူမသည်တကယ်တော့သူလျှိုတစ်ယောက်ပါ။ >
< start="362.13" dur="1.324"> ငါသူလျှိုတစ်ယောက်ကိုတွေ့လိုက်တယ်။ >
< start="363.454" dur="0.833"> - ဘာ? >
< start="364.287" dur="1.283"> - စိတ်မကောင်းပါဘူး၊ ဘယ်သူမှလက်ထိပ်ခတ်မယူရဘူး >
< start="365.57" dur="0.833"> ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူး။ >
< start="366.403" dur="1.217"> - သူမလက်ထိတ်ခတ်မှထွက်လာသည်ကိုစောင့်ပါ။ >
< start="367.62" dur="0.99"> - အင်း၊ ဒါကတကယ်မြန်တယ်။ >
< start="368.61" dur="1.673"> - ပြီးတော့မင်းမှာသူလျှိုကိရိယာရှိတယ်။ မင်းအရင်လုပ်ပြီးပြီ >
< start="370.283" dur="1.602"> - ဆိုလိုတာကငါတို့ရဲ့လက်ထိတ်ခတ်ထဲကနေအမြဲတမ်းထွက်ရတယ်။ >
< start="371.885" dur="0.833"> - အားလုံးအချိန်! >
< start="372.718" dur="0.871"> - Matt, မင်းကိုမယုံတာဒါကြောင့်။ >
< start="373.589" dur="0.833"> - အိုး, ဒီသဘာဝကျပါတယ်။ >
< start="374.422" dur="1.458"> - ဟုတ်တာပေါ့၊ သူကမင်းကိုဘယ်သူ့ကိုမှမတွေ့စေရဘူး။ >
< start="375.88" dur="0.833"> - ဘာကိုစောင့်ရမှာလဲ? >
< start="376.713" dur="0.833"> - မင်းလုပ်ခဲ့တာငါသိတယ် - မတရားဘူး! >
< start="377.546" dur="1.054"> - သူမဤသို့လုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်။ >
< start="378.6" dur="1.24"> သူမတကယ်လေ့ကျင့်ရေးမဟုတ်လျှင်။ >
< start="379.84" dur="0.833"> သူမကသူလျှိုတစ်ယောက်ပါ >
< start="380.673" dur="2.427"> - ဒါပေမယ့်ဂိမ်းကစားနည်းကိုသူလျှိုလိုချင်တာလား။ >
< start="383.1" dur="1.08"> - မဟုတ်ဘူး၊ ငါတို့လေ့ကျင့်ပေးနိုင်တဲ့သူကိုလိုချင်တယ်၊ >
< start="384.18" dur="1.28"> သင်တန်းပြီးသားတစ်စုံတစ်ယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ >
< start="385.46" dur="2"> ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့ကိုမယုံနိုင်ပါ >
< start="387.46" dur="1.095"> - မင်းအပြင်ထွက်နေတယ် - ဝိုး။ >
< start="388.555" dur="1.005"> - ဒါဟာအဆိုးရွားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုပါ။ >
< start="389.56" dur="0.98"> - သူမက GMI အတွက်ကောင်းတယ်လို့ထင်လား >
< start="390.54" dur="0.833"> ငါကုမ္ပဏီအတွက်လွှဲပြောင်းယူလိမ့်မယ်, >
< start="391.373" dur="1.257"> ငါတို့အသစ်ကတပ်သားသစ်လိုအပ်ပါတယ်။ >
< start="392.63" dur="0.833"> - အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ >
< start="393.463" dur="0.987"> - ဟုတ်လား? >
< start="394.45" dur="0.833"> - သူမတစ်ကိုယ်တည်းနေတယ်လို့ထင်လား >
< start="395.283" dur="1.297"> - ကောင်းပါပြီ၊ စိန်ခေါ်မှုအပေါ်ကောင်းတဲ့အလုပ်၊ >
< start="396.58" dur="1.07"> သင်အမှန်တကယ်ကောင်းသော၊ တကယ်ကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်။ >
< start="397.65" dur="0.833"> သင်ဒီမှာနေတုန်းပဲ >
< start="398.483" dur="1.666"> မင်းထွက်သွားပြီလို့ငါပြောတယ် - ကောင်းပြီ၊ >
< start="400.149" dur="1.484"> ငါရေအနည်းငယ်ရမယ်ထင်တယ် >
< start="409.16" dur="1.31"> သူမဟာကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။ >
< start="410.47" dur="0.99"> ဆိုလိုတာကဘာမှားလဲ >
< start="411.46" dur="2.04"> သူမနည်းနည်းရူးသွပ်သည်အထိအေးမြခဲ့သည်။ >
< start="413.5" dur="1.313"> - ဟုတ်၊ - ဒါအမှန်ပဲ၊ >
< start="419.32" dur="1.53"> - Matt နောက်တစ်ခါစတိုးဆိုင်၌ဘာရှိတယ်လို့သင်ထင်သလဲ >
< start="420.85" dur="1.52"> - ငါမသိရဘူး၊ >
< start="422.37" dur="2.93"> အစဉ်အမြဲငါမြင်ဖူးသမျှအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဂိမ်းမာစတာသူလျှိုလေ့ကျင့်ရေး။ >
< start="425.3" dur="1.42"> Zam fam, သင်ထင်သောအရာကိုအောက်တွင်ချမှတ် >
< start="426.72" dur="2.07"> ကျွန်တော့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းသစ်ကိုရှာဖို့ Matt ကလုပ်သင့်တယ်။ >
< start="428.79" dur="1.3"> ငါထင်တာကတော့ဒါမဟုတ်ဘူး။ >
< start="430.09" dur="1.22"> - ဆိုလိုတာကမင်းပြောနိုင်တာမင်းကမင်းပဲလို့ပြောတယ် >
< start="431.31" dur="1.07"> ပြီးသားတစ်စုံတစ် ဦး ကိုကောက်ယူခဲ့, ပြီးတော့ >
< start="432.38" dur="2.88"> လုပ်ပါစေ၊ - အဲ့ဒါအမှန်ပဲ။ >
< start="435.26" dur="1.4"> - သူပြောပြီးတာနဲ့ငါပြောပြမယ်၊ >
< start="436.66" dur="1.4"> ဒါပေမယ့်သူ့ကိုသူ၏အခိုက်အကြကုန်အံ့ကြကုန်အံ့။ >
< start="438.06" dur="0.833"> - အိုကေ။ >
< start="438.893" dur="1.067"> - ရေဗက္ကာ၊ ဒီမှာလာ၊ လာ၊ ဒီမှာလာ၊ ဒီမှာလာ။ >
< start="439.96" dur="0.833"> - အင်း? >
< start="440.793" dur="0.833"> - ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာသူတို့ကိုသင်ပေးလို့ရမလား >
< start="441.626" dur="1.324"> ဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကခုန်? >
< start="442.95" dur="0.833"> မြင့်မားတဲ့ hack သူလျှို? >
< start="443.783" dur="1.087"> - အိုး, မြင့်မားတဲ့ hack မှိုသူလျှို? >
< start="444.87" dur="0.833"> ဟုတ်တယ် >
< start="445.703" dur="0.896"> - မင်းအဲဒီလိုလုပ်လို့ရလား >
< start="446.599" dur="0.833"> သူတို့သည်သင်၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ >
< start="447.432" dur="1.666"> သူတို့ဖြစ်ကောင်းလည်းဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်ကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="449.098" dur="0.833"> - GAMASTE R. လိုပဲ >
< start="449.931" dur="1.219"> - အိုကေ၊ ငါရတယ် >
< start="451.15" dur="1.11"> ကျွန်ုပ်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူကခုန်နိုင်ပါသည်။ >
< start="452.26" dur="1.26"> ငါတို့ TikTok ကိုလုပ်လိမ့်မယ်။ >
< start="453.52" dur="1.072"> - ဟုတ်တယ်၊ >
< start="454.592" dur="0.885"> - ယောက်ျားတွေ, ဒီမှာလာ, ဒီမှာလာ, ဒီမှာလာ။ >
< start="455.477" dur="0.833"> - ဘာ? >
< start="456.31" dur="0.838"> - ငါအဲဒီမှာအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုမသိ။ >
< start="457.148" dur="0.833"> - အင်း၊ - မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? >
< start="457.981" dur="0.833"> - ဒါကကြောက်စရာကောင်းတယ် >
< start="458.814" dur="1.076"> ဒါကအရမ်းကိုအေးတယ် - အင်း? >
< start="459.89" dur="0.833"> - မင်းဒါကိုမင်းစီစဉ်ထားပြီလို့ထင်ခဲ့တယ် >
< start="460.723" dur="1.867"> အဲဒါကြောင့်ငါတို့သူတို့ကိုဒီမှာဆွဲခေါ်သွားတယ်၊ >
< start="462.59" dur="1.013"> သူတို့အိပ်နေတဲ့အခါ၊ ပြီးတော့ - အင်း။ >
< start="463.603" dur="2.047"> ငါဆိုလိုတာကငါဒါကိုစီစဉ်ခဲ့တယ် - အင်း၊ >
< start="465.65" dur="2.303"> - ငါပီပီထုတ်ဆောင်ခဲ့။ - သူတို့ဘယ်လို hack ရမယ်ဆိုတာသိသလား။ >
< start="467.953" dur="1.968"> ဟင့်အင်း၊ သူလျှိုသောက်ချင်တာကိုမလိုချင်ဘူး - ဟင့်အင်း၊ >
< start="469.921" dur="1.342"> - ဒါမလိုချင်ဘူး - တူတူပုန်းတမ်း! >
< start="471.263" dur="0.833"> - အစဉ်မပြတ်ဖုံးကွယ်နှင့်ရှာပါ။ - အဘယ်ကြောင့်? >
< start="472.096" dur="2.284"> - တူတူပုန်းတမ်း။ - အိုးအိုကေ။ >
< start="474.38" dur="2.31"> - လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောအမဲလိုက်ခြင်းနှင့်အရာဝတ္ထုများပေါ်တွင်အရာအားလုံးကုန်ပစ္စည်းများ။ >
< start="476.69" dur="1.26"> သူတို့တစ်တွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့လိုပဲ >
< start="477.95" dur="1.3"> အခြေအနေကသူတို့ပုန်းဖို့ဘယ်လိုသိရန်လိုအပ်သည်။ >
< start="479.25" dur="1.44"> - ဟုတ်တယ်၊ သူတို့ Mr. X ဆီကနေထွက်ခွာဖို့ကြိုးစားနေရင်ကော။ >
< start="480.69" dur="1.2"> - အတိအကျ။ >
< start="481.89" dur="1.31"> - သူတို့ဝှက်လို့မရဘူးဆိုရင် - ဒါမှမဟုတ်ဝံ။ >
< start="483.2" dur="1.075"> - နောက်မှတွေ့မယ်။ >
< start="484.275" dur="0.833"> - နုတ်ဆက်ပါတယ်။ >
< start="485.108" dur="1.666"> - ဘယ်လောက်ကြာကြာ၊ ဒီကခုန်တယ်လို့ငါထင်တယ် >
< start="486.774" dur="3.039"> - အိုးသင်ရတယ် - ဟုတ်ကဲ့အိုး။ >
< start="489.813" dur="2.61"> - ဂိမ်း >
< start="492.423" dur="2.48"> - ထိုင်ခုံ့တဲ့သူဟေ့? ယောက်ျားတွေထိုင်ချင်ပါသလား >
< start="494.903" dur="1.02"> - အိုး, ငါတို့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဖြစ်လိမ့်မယ်။ >
< start="495.923" dur="1.437"> - အခုလက်မလေးပေးပါ။ >
< start="497.36" dur="1.129"> မင်းထင်ရင်ဒါကကောင်းတယ်။ >
< start="498.489" dur="0.961"> ငါတို့ပုန်းနေပြီးဒီဥယျာဉ်ကိုသွားဖို့ကြိုးစားကြတယ်။ >
< start="499.45" dur="0.833"> - ဟုတ်လား? >
< start="500.283" dur="0.997"> - ရေဗက္ကာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းငါတို့မပြောနိုင်ဘူး၊ >
< start="501.28" dur="1.33"> ဒါကြောင့်ငါတို့အဆင်ပြေ, ငါတို့ Tesla အတွက်သူမ၏ရနိုင်မည်နည်း >
< start="502.61" dur="0.833"> - ဟေ့ကောင်တွေ! >
< start="503.443" dur="0.833"> - အင်း၊ - အိုဟုတ်တယ်။ >
< start="504.276" dur="1.351"> - သင်မှန်ပါသည်၊ သင်မှန်ပါသည်၊ သင်မှန်ပါသည် >
< start="505.627" dur="2.803"> ဒါကြောင့်ငါတို့တကယ်တော့ဒီနောက်စီစဉ်ထားရှိသည်။ >
< start="508.43" dur="1.07"> - အံ့အားသင့်စရာလိုပဲ! >
< start="509.5" dur="2.012"> - ငါတို့ကိုမင်း Tesla ကိုသွားစေချင်တယ်။ >
< start="511.512" dur="0.833"> - ငါလား >
< start="512.345" dur="0.963"> - အင်း၊ >
< start="513.308" dur="0.833"> သင်ထွက်နေပြီ - အိုး! >
< start="514.141" dur="1.946"> - သင်သည်သင်၏အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းမဖြစ်နိုင်ပါ။ ထွက်သွား! >
< start="516.087" dur="0.833"> - ဟုတ်တယ်၊ ငါတို့နောက်ဆုံးလေ့လာခဲ့တာပေါ့၊ >
< start="516.92" dur="0.91"> မင်းကအသရေလဲနေတယ်။ >
< start="517.83" dur="1.38"> - ကောင်းပြီ၊ ဒါပေမယ့်ငါတို့မှာအနည်းဆုံးတော့ရနိုင်ပါတယ် >
< start="519.21" dur="1.231"> ကခုန်ခြင်းကတကယ်မြန်သလား >
< start="523.541" dur="4.675"> ဘာ? >
< start="528.216" dur="0.833"> - ဒါကတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲ၊ >
< start="529.049" dur="1.721"> - အိုကေ၊ အဆင်ပြေပါ၊ ကားကိုသွားပါ။ >
< start="530.77" dur="1.07"> - တက်စလာတွင်ပုန်းရှောင်ပါ! >
< start="531.84" dur="1.61"> - Zam Fam၊ သူတို့မယုံနိုင်ဘူး >
< start="533.45" dur="1.62"> ငါ့ကို Tesla အတွင်းပိုင်းနေဖို့အောင် >
< start="535.07" dur="1.66"> သူတို့သည်ငါ၏အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသစ်ကိုကြိုးစားရှာဖွေနေစဉ်။ >
< start="536.73" dur="2.73"> Matt ကသူအခုဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူးလိုငါခံစားရတယ်။ >
< start="539.46" dur="1.73"> - ဒါကြောင့်ငါတို့ဒီပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှဖယ်ရှားပစ်သလဲ >
< start="541.19" dur="2.004"> - မဟုတ်ဘူး၊ - ငါမသိဘူး? >
< start="543.194" dur="0.833"> - ဤအရာဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲ? >
< start="544.027" dur="1.663"> - ငါတို့ရှာတွေ့ပြီ၊ ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီလား။ >
< start="545.69" dur="1.27"> - ဒါကစူပါလွယ်ကူတယ်လိုပဲ။ >
< start="546.96" dur="1.09"> ငါဒီပန်းခြံထဲကဘယ်သူ့ကိုမှရှာနိုင်ဘူး >
< start="548.05" dur="1.95"> - အင်း၊ ငါဆိုလိုတာကသေချာပါတယ် ငါဒီမှာအများကြီးပါပဲ။ >
< start="550" dur="0.833"> - လိုပဲပြေးနေလား။ >
< start="550.833" dur="0.833"> - ဟုတ်တယ်၊ - အဆင်ပြေပါတယ်။ >
< start="551.666" dur="1.074"> - မင်းဒီပန်းခြံကိုရောက်ဖူးလား >
< start="552.74" dur="1.34"> - ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါဒီပန်းခြံကိုရောက်ဖူးတယ်။ >
< start="554.08" dur="0.833"> ငါပန်းခြံတွေအများကြီးခဲ့ >
< start="554.913" dur="1.537"> ငါဟိုမှာငါ့ဗီရိုတူပေမယ့်ကောင်းပြီ။ >
< start="556.45" dur="1.75"> - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ ဂိမ်းမာစတာကွန်ယက်။ >
< start="558.2" dur="1.566"> - သုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ ဂိမ်းမာစတာ။ >
< start="560.599" dur="1.381"> - လာပါ! >
< start="561.98" dur="2.43"> အားလုံးကောင်းပြီ၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ဟာဖျော်ဖြေရေးအတွက်ပျော်စရာဂိမ်းကိုကစားမယ်။ >
< start="564.41" dur="1.91"> မင်းသိတဲ့အတိုင်းပဲမင်းမဟာဗျူဟာတွေရှိလိမ့်မယ်ဟုတ်သလား။ >
< start="566.32" dur="1.9"> - ကျွန်ုပ်၏နည်းဗျူဟာမှာအောက်ခံပုန်းအောင်းနေသည်။ >
< start="568.22" dur="1.5"> - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော့်မှာအစီအစဉ်မရှိဘူး။ >
< start="569.72" dur="2.04"> ငါသိသမျှအားလုံးကကျွန်မရဲ့ကလေး BBR ဟာအနားယူဖို့လိုတယ်ဆိုတာပါပဲ။ >
< start="571.76" dur="1.51"> - ငါအဲဒီမှာသစ်ပင်တပင်၌ပုန်းရှောင်မယ်။ >
< start="573.27" dur="2.53"> အကိုင်းအခက်တစ်ခုပေါ်သို့တက်ပြီးဆက်နေပါ။ >
< start="575.8" dur="1.06"> - ငါပင်အတူတူပင်ပင်၌ပုန်းရှောင်ပေါ့။ >
< start="576.86" dur="0.87"> မျှော်လင့်သူတို့သည်ငါ့ကိုဒုတိယရှာပါ။ >
< start="577.73" dur="0.833"> - ဘာ? >
< start="578.563" dur="2.047"> - ဒါဆိုဒီဆွဲထားတဲ့အင်္ကျီနောက်ကွယ်မှာပုန်းနေမယ် >
< start="580.61" dur="1.31"> ငါပြီးပြည့်စုံသောအစက်အပြောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ >
< start="581.92" dur="1.74"> - ဒါက ၁၀ စက္ကန့်ပုန်းအောင်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုရှာလိမ့်မယ်။ >
< start="583.66" dur="1.316"> သစ်ပင်ကိုကူးဖို့သင်လိုအပ်တယ်။ >
< start="584.976" dur="0.833"> - ဘာ? >
< start="585.809" dur="0.936"> - သူတို့ကသစ်ပင်ရှိနှင့်ပြီးသားလား - သင်သစ်ပင်သို့သွားရန်ရှိသည် >
< start="586.745" dur="0.833"> - သစ်ပင်သို့သွား? - Yep! >
< start="587.578" dur="0.833"> - ကောင်းပါပြီ။ - ကောင်းပါပြီ။ >
< start="588.411" dur="0.833"> ငါတို့သစ်ပင်မှာမုန်လား? >
< start="589.244" dur="0.833"> - ထိုအပင်၌မုန်မရှိပါ။ >
< start="590.077" dur="0.833"> - ဘာ? >
< start="590.91" dur="1.666"> - ကောင်းပြီ၊ ၁၀ စက္ကန့်စတင်သည်။ >
< start="592.576" dur="0.833"> - သူတို့ပုန်းအောင်းနေပြီးရှာနေကြတာလား။ >
< start="593.409" dur="1.401"> သူတို့ကအကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ >
< start="594.81" dur="1.12"> ငါအတွက်ပုန်းအောင်းကစားနေ >
< start="595.93" dur="1.75"> ဒါကအစဉ်အဆက် cringiest အရာပါ! >
< start="597.68" dur="2.28"> Zam Fam, မိန်းကလေးတ ဦး ကသူမခေါင်းပေါ်မှာတစ်မျိုးတည်းသာရှိနေသည်။ >
< start="599.96" dur="1.41"> နှင့်အခြားရုံထိုင်နေသည်။ >
< start="601.37" dur="2.48"> လိုပဲ, ဒါကအားလုံးဖုံးကွယ်ခြင်းနှင့်မရှာ! >
< start="603.85" dur="1.08"> - ငါး။ - ငါး။ >
< start="604.93" dur="1.114"> - လေး။ - လေး။ >
< start="606.044" dur="0.833"> - သုံး။ - သုံး။ >
< start="606.877" dur="0.833"> - နှစ်။ - နှစ်။ >
< start="607.71" dur="0.833"> - တစ်ခု - တစ်ခု >
< start="608.543" dur="0.833"> - သွား! - သွား! >
< start="609.376" dur="0.833"> - ငါဘယ်သူ့ကိုမှမမြင်ဘူး >
< start="610.209" dur="1.734"> Zam Fam၊ ဘယ်သူ့ကိုမှတွေ့ရင်ငါ့ကိုအသိပေးပါ။ >
< start="613.81" dur="1.577"> - အိုကေ။ >
< start="615.387" dur="2.343"> အိုကေ၊ GMI သင်တန်း။ >
< start="617.73" dur="1.56"> စောင့်ပါ, ဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်အတူခြေရှိပါတယ်။ >
< start="619.29" dur="1.06"> ဒါကတစ်စုံတစ် ဦး ပဲ။ >
< start="620.35" dur="1.42"> မင်းကိုတွေ့ပြီ >
< start="621.77" dur="0.833"> သင်ထွက်နေပြီ >
< start="622.603" dur="0.833"> သင်ထွက်နေပြီ >
< start="623.436" dur="0.98"> ဟိုမှာပါ! >
< start="624.416" dur="1.757"> - အိုး! >
< start="626.173" dur="1.497"> အဆိုပါ drive ကို, GMI! >
< start="627.67" dur="1.03"> - ဒါကရုံကန်တော့ချွန်ပဲ။ >
< start="628.7" dur="1.01"> - ငါဘာလုံခြုံမှုရှိလဲ။ >
< start="629.71" dur="2.36"> အိုအိုး၊ အိုကေ၊ နားထောင်၊ ငါဒီဝက်ဝံလို့ထင်ခဲ့တယ် >
< start="632.07" dur="0.94"> ဒါဟာတကယ်လူတစ်ယောက်ပါ။ >
< start="633.01" dur="1.347"> မင်းတွေ့ပြီ >
< start="634.357" dur="1.743"> - မင်းတောင်မှပုန်းနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး >
< start="636.1" dur="0.96"> - သူငိုက်နေတယ်။ >
< start="637.06" dur="0.91"> သူအနားယူရမယ်။ >
< start="637.97" dur="1.45"> - အင်း၊ ဒါပေမယ့်ဒါကမလွယ်ဘူး။ >
< start="639.42" dur="1.46"> - Agent S၊ ဘယ်လောက်ရှာတွေ့ပါသလဲ။ >
< start="640.88" dur="1.65"> - ငါနင့်ကိုတွေ့တယ်၊ >
< start="642.53" dur="1.185"> - ပြန်လာ! >
< start="643.715" dur="0.833"> - ဟေ့! >
< start="645.616" dur="2.244"> - လူတိုင်းကိုတွေ့ပြီ။ >
< start="647.86" dur="0.833"> - အင်း! - အင်း! >
< start="651.154" dur="0.833"> - ဟုတ်တယ်၊ >
< start="651.987" dur="1.053"> ငါတို့ပုန်းနေတဲ့နေရာကအရမ်းကောင်းတယ်။ >
< start="653.04" dur="2.02"> - သင်ယောက်ျားတွေကတကယ်ကိုကောင်းတယ်။ - အင်း၊ ငါမင်းပုန်းနေတာကိုး။ >
< start="655.06" dur="0.833"> အဲဒါပြီးပြည့်စုံတယ် >
< start="655.893" dur="1.717"> - ဘုရား၊ ကျေးဇူးပါဘုရား။ >
< start="657.61" dur="1.26"> - ပြီးတော့ငါမြက်ပင်တစ်ပေါက်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ >
< start="658.87" dur="1.96"> - ကောင်းပြီ၊ အဲဒါပုန်းနေပြီးစိန်ခေါ်မှုကိုရှာဖွေတယ်။ >
< start="660.83" dur="1.81"> အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အလုပ်၊ >
< start="662.64" dur="2.32"> ဒါကဘယ်သူမျှမဆိုရမှတ်သွင်းယူတဲ့ဂိမ်းဖြစ်ခဲ့သည်, >
< start="664.96" dur="2.62"> မည်သူမျှမည်သည့်အချက်မျှမဆုံးရှုံးခဲ့ပါ၊ >
< start="667.58" dur="1.25"> - ငါအဆင်ပြေလားငါ့ကြွက်နို့သောက်ဖို့သွားရမလား။ >
< start="668.83" dur="1.47"> - အိုးဘာကြောင့်လဲ >
< start="670.3" dur="0.833"> - သူကရေငတ်တယ်။ >
< start="677.756" dur="1.444"> - [သူလျှိုယောက်ျား] ရေပေါ်မှာလား >
< start="679.2" dur="1.38"> - ယောက်ျားတွေ၊ ငါလာမယ့်စိန်ခေါ်မှုအတွက်ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ >
< start="680.58" dur="0.93"> - အိုး၊ - အင်းဘာလဲ >
< start="681.51" dur="2.009"> - နောက်ဆုံးစိန်ခေါ်မှု, တော်ဝင်လေ့ကျင့်ရေးစစ်တိုက်။ >
< start="683.519" dur="1.55"> အကောင်းဆုံး Ninja လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်သူမြင်တာလဲ။ >
< start="685.069" dur="0.833"> - ဘုရားရေ။ - အကောင်းဆုံးလေးအနိုင်ရရှိ? >
< start="685.902" dur="2.267"> - ကောင်းပြီ၊ နှေးနှေးစွာလုပ်ဆောင်ပါ။ >
< start="688.169" dur="1.984"> အရာအားလုံးနှေးကွေးနေအတွက်ပိုကောင်း! >
< start="690.153" dur="0.833"> - အင်းအို >
< start="690.986" dur="1"> အေးပါတယ် >
< start="693.529" dur="0.833"> - သင်အဆင်သင့်ပဲ။ >
< start="694.362" dur="0.833"> - အင်း! >
< start="695.195" dur="1.178"> - အိုကေ၊ >
< start="698.37" dur="1.71"> - တော်ဝင်လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကိုတိုက်။ >
< start="700.08" dur="1.42"> အကောင်းဆုံး Ninja လှုံ့ဆော်မှုတွေကိုဘယ်သူမြင်တာလဲ။ >
< start="701.5" dur="1.2"> ငါသည်သင်တို့ကိုအကြောင်းမရှိ, ငါ့ကိုလာမမြင်နိုင်အလောင်းအစား >
< start="702.7" dur="2.54"> ဒါအရမ်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကြီးလွန်းတယ်။ >
< start="705.24" dur="0.833"> ငါ slick ကပြောသည်! >
< start="706.073" dur="1.487"> ယောက်ျားတွေများများရှိလား >
< start="707.56" dur="0.833"> ဒီလိုမျိုးတစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တာလား >
< start="708.393" dur="0.833"> ဒါမှမဟုတ်ကန်, ခုန်ကန်? >
< start="709.226" dur="1.104"> - အင်း။ - အင်း။ >
< start="710.33" dur="1.66"> - အိုကေ၊ ငါတို့ဘယ်သူ့မှာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။ >
< start="711.99" dur="1.15"> ဒီအတွက်သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="715.075" dur="1.141"> - အိုကေ၊ >
< start="716.216" dur="0.833"> တော်ဝင်စစ်တိုက်! >
< start="717.049" dur="0.833"> - ကောင်းပြီ၊ ဒါဆိုသင်ကသင်၏ scorecard ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="717.882" dur="1.865"> ငါတို့သူတို့ကိုအခြေခံပြီးဂိုးသွင်းမယ်။ >
< start="719.747" dur="0.833"> - အိုကေ၊ - ဝါး! >
< start="720.58" dur="0.833"> - သင်ဘာလုပ်နေလဲ? >
< start="721.413" dur="0.833"> မင်းငါ့ကိုဟိုမှာပဲရှိတယ်လို့ငါထင်ခဲ့တယ် >
< start="722.246" dur="1.574"> - ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်တော်တို့ကနည်းလမ်းသုံးမျိုးနဲ့တရားစီရင်မှာပါ။ >
< start="723.82" dur="2.283"> မြန်နှုန်း, အမြင့်နှင့်သွက်လက်။ >
< start="726.103" dur="0.833"> - အိုကေ။ >
< start="726.936" dur="1.061"> - အိုကေ၊ မင်းအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။ >
< start="727.997" dur="1.583"> - အားလုံးကောင်းပြီ၊ >
< start="733.89" dur="1.187"> - ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်။ >
< start="735.077" dur="2.033"> ဟုတ်တယ်၊ ကောင်းတယ်၊ - ငါစဉ်းစားနေတာက >
< start="737.11" dur="1.167"> ငါဒါလုပ်မယ် >
< start="738.277" dur="2.01"> - ငါဘာလုပျမလဲ >
< start="740.287" dur="0.833"> - အိုး! >
< start="741.12" dur="0.833"> - အိုကေ! >
< start="754.23" dur="1.07"> - စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်။ - အင်း၊ >
< start="755.3" dur="1.8"> - မင်းသိတယ်၊ တစ်ယောက်ယောက်ကိုကျိန်းသေပေါက်ကျသွားနိုင်တယ်။ >
< start="757.1" dur="0.97"> - ဟုတ်ကဲ့၊ >
< start="758.07" dur="1.36"> သူမ၏အရာတစ်ခုလုံးငါတူလိမ့်မယ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏ >
< start="759.43" dur="1.37"> ခြေထောက်ကိုကိုင်ပြီးနင်သိလား >
< start="760.8" dur="1.36"> - [Agent S] အိုကေ၊ အဆင်ပြေပါသည်။ >
< start="762.16" dur="1.92"> ငါဂိုးသွင်းမယ်၊ ငါဂိုးသွင်းမယ်။ >
< start="764.08" dur="2.08"> - သူတို့ကရာတေးလှုပ်ရှားနေပုံရသလား။ >
< start="766.16" dur="2.53"> ဒါက Ninja ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့တူလား။ >
< start="768.69" dur="2.408"> ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ထဲကတစ်ယောက်မှ Ninja သင်တန်းမရှိဘူးလို့ငါထင်တယ်။ >
< start="779.248" dur="2.087"> - ဒါက Ninja လားဒါမှမဟုတ်ဘဲလေးလိုလား။ >
< start="781.335" dur="2.225"> - [အေးဂျင့် R] ဒါကဖြစ်ခဲ့သည်။ - အလွန်ယဉ်။ >
< start="783.56" dur="1.13"> - အိုကေ၊ ငါလုပ်နေတာကိုငါသိတယ် >
< start="784.69" dur="1.21"> - အိုကေ, ကလေးထမ်းရွက်ကြွက်, သင်ခံစားရလိမ့်မယ် >
< start="785.9" dur="2.603"> နည်းနည်းခုန်သော်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်။ >
< start="794.451" dur="0.833"> - ကောင်းပါပြီ? >
< start="795.284" dur="1.236"> - မင်းသူမကိုဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာလဲ။ >
< start="796.52" dur="1.633"> - အမြင့်ရှိတယ်၊ အမြင့်ရှိတယ်။ >
< start="798.153" dur="2.407"> ပြီးတော့, တူ, ဆင်း။ - ဒါဟာ yeah bom ကဲ့သို့ဖြစ်၏။ >
< start="800.56" dur="1.05"> သငျသညျမယ်လျှင်သင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလိုအပ်ပါတယ် >
< start="801.61" dur="1.46"> မင်းသူမရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်လား >
< start="803.07" dur="1.42"> - ဟုတ်တယ်၊ သေချာတာပေါ့။ >
< start="804.49" dur="1.3"> - ဟေးငါ့ဖုန်းဘယ်မှာလဲ။ >
< start="805.79" dur="1.935"> ဖုန်းကိုငါ့မှာထားခဲ့တာလား >
< start="813.828" dur="0.833"> - ဟိုင်းဟား! >
< start="816.6" dur="2.495"> - အိုး, သူမငယ် Boop လုပ်ခဲ့တယ်, ပြီးတော့တစ် kachow >
< start="819.095" dur="1.041"> သူမဆင်းသက်တဲ့အခါမှာ yeah? >
< start="820.136" dur="1.458"> - အင်း၊ - အဲဒါကောင်းတယ်! >
< start="821.594" dur="1.666"> - ဘာလဲသိလား? ဒီတက်စလာမှာနေရတာစိတ်မကောင်းပါဘူး >
< start="823.26" dur="2.071"> ငါပြောသင့်တယ်နဲ့တူငါခံစားရတယ် >
< start="825.331" dur="0.849"> ဘယ်သူကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းဖြစ်မလဲ >
< start="826.18" dur="1.74"> ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါကငါ့ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်း၊ >
< start="827.92" dur="1.41"> အဆိုးရွားဆုံးသောစိန်ခေါ်မှုကို >
< start="829.33" dur="1.2"> ဒါနဲ့ငါထွက်အဲဒီမှာရမယ်။ >
< start="830.53" dur="1.18"> - အားလုံးကောင်းတယ်၊ >
< start="831.71" dur="0.833"> ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမျိုးသမီးများ >
< start="832.543" dur="0.907"> - ဟယ်လို? >
< start="833.45" dur="1.57"> သင်တို့ကိုငါမေ့လျော့ယောက်ျားတွေ, ငါ Tesla ၌ရှိ၏။ >
< start="835.02" dur="1.052"> - အိုဟုတ်တယ်! - အိုဟုတ်တယ်! >
< start="836.072" dur="0.833"> - မင်းကိုလုံးဝမေ့သွားတယ် >
< start="836.905" dur="1.382"> - အိုကေ၊ ငါ့ဖုန်းမရှိခဲ့ဘူး။ >
< start="838.287" dur="1.399"> - အိုး! - အိုး! >
< start="839.686" dur="0.833"> - ဒါကပျော်စရာကြီး။ >
< start="840.519" dur="3.541"> - ပြီးပြည့်စုံသောအချိန်ကိုက်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နောက်ဆုံးရမှတ်များကိုပေးတော့မည်ဖြစ်သည်။ >
< start="844.06" dur="2.81"> အဘယ်သူသည်ပေါ်ရွေ့လျားနေသည်နှင့်အဘယ်သူဖြစ်လိမ့်မည် >
< start="846.87" dur="2.04"> ဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီလား - ပယ်ဖျက်ခဲ့လား >
< start="848.91" dur="3.217"> - ငါဒါကိုသုံး၊ နှစ်၊ တစ်၊ >
< start="853.579" dur="1.167"> - ဝါး! - ဝါး! >
< start="855.667" dur="1.75"> - 13, 13, 10, 13, 13 ။ >
< start="859.918" dur="0.833"> ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ထွက်သွားပြီဖြစ်သည် >
< start="860.751" dur="0.875"> - ဘာ? >
< start="861.626" dur="0.833"> သူမကို >
< start="862.459" dur="1.825"> သူမသည်မြေပေါ်မှာကပ်ခဲ့သည်! >
< start="864.284" dur="5"> ကောင်းကင်တမန်များအားရိုက်ပုတ်ခြင်း၊ >
< start="869.367" dur="3.613"> သင်နှင့်သင်၏ဝက်ဝံကြွက်သည်မည်သူမျှမကြိုက်ပါ။ >
< start="872.98" dur="1.14"> သင်! >
< start="874.12" dur="1.3"> မင်းကအေးတယ်၊ ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ်။ >
< start="875.42" dur="0.833"> ငါတို့နိုင်ခဲ့တယ်။ >
< start="882.77" dur="2.063"> - ငါအများကြီးလွဲချော်တူသောငါခံစားရတယ်? >
< start="884.833" dur="2.816"> - ဒါကဘာလဲဆိုတာငါမသိ။ - အဲ? >
< start="887.649" dur="1.853"> - ငါခံစားရတယ်ဟေး! >
< start="889.502" dur="2.098"> - သူမပါသေးသေး၊ >
< start="891.6" dur="0.929"> - ပြန်လာသည်! >
< start="892.529" dur="3.738"> - ဒါကမင်းရဲ့ပုံပဲ။ >
< start="896.267" dur="0.833"> - ရေဗက္ကာဝါ။ >
< start="897.1" dur="0.833"> - [Agent S ကို] အိပ်စက်ခြင်းမိုcloud်းတိမ်ကိုရယူပါ! >
< start="897.933" dur="0.833"> - ဒါပေမယ့်ငါကြင်နာသူမ၏ဆံပင်ကြိုက်တယ်! >
< start="898.766" dur="1.983"> ဒါဟာတကယ်ကိုချစ်စရာကောင်းပေမယ့်သူမကအရူးပဲ! >
< start="900.749" dur="0.985"> - သူမကအရူးပဲ! - ဝိုး! >
< start="901.734" dur="0.833"> - အိုကေ။ >
< start="902.567" dur="1.989"> - ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်သူမဟာသူရဲကောင်းနီလိုငါ့ကိုသတိရစေတယ်။ >
< start="904.556" dur="1.594"> - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်မချစ်နိုင်လျှင်မည်သူမျှမလုပ်နိုင်ပါ။ >
< start="906.15" dur="2.717"> ဤအရာအလုံးစုံတို့သည်ငါ့ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏။ >
< start="908.867" dur="1.781"> - နည်းနည်းရပြီ - မင်းဒါကိုမှတ်မိလား >
< start="910.648" dur="2.082"> ငါကဲ့သို့သောဖြစ်ခဲ့သည်။ - ကြောင်းချိန်းတွေ့ဂိမ်းကာလအတွင်း? >
< start="912.73" dur="1.1"> - ယောက်ျားတွေလား >
< start="913.83" dur="1.62"> ဒီဟာကတစ်ခုခု (သို့) တစ်ခုခုကိုရေဖိတ်ခဲ့သလား၊ >
< start="915.45" dur="1.9"> ငါ့ဖုန်းမှာတစ်ခုခုမှားယွင်းမှုဖြစ်စေတယ် >